Akugxilwe kwabesifazane nezingane ngokuguquguquka kwesimo sezulu - Bayede News
Ngokwedlule ngilobe ngamaqiniso ngokuguquguquka kwesimo sezulu. Ngibalule ukuthi lokhu kuyinselelo ethinta umhlaba wonke edinga ukubhekwa uwonke wonke kungakhathalekile ukuthi ukuliphi izwe.
Okwagcizelelwa phambilini yiqiniso lokuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu yinselelo yabantu enomphumela omubi empilweni yabo. Kwaphinde kwagcizelelwa ukuthi lesi simo sithinta impilo yabantu futhi siyinselelo enqubekeleni phambili ikakhulukazi kosomlando bezomnotho njengami nabo bonke labo abazibandakanye ezifundweni zenqubekela phambili.
Nakuba sikhuluma ngomthelela wokuguquguquka kwesimo sezulu, iqiniso lithi lokhu akuzweli emalungwini omphakathi ngendlela elinganayo.Umphumela wokufi nyelela kulo mthetho ojwayelekile kube ukuvikela abazali ekushushisweni nasekuboshweni. Ukuziphatha okufanayo okungenziwa yinoma yimuphi umuntu ngaphandle komzali enganeni yakhe kungaba udlame olubhekiswe enganeni kodwa engekwazi ukuzivikela,” Bayingxenye yabantu emphakathini abadinga ukunakekelwa nokuvikelwa uma kukhulunywa ngodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu
Kuyaziwa ukuthi abantu besifazane nezingane bathwala kanzima ngenxa yemiphumela engemihle yokuguquguquka kwesimo sezulu ngoba yibo ababambe ezolimo. Kodwa, kancane kancane, seliyahlonishwa iqhaza labo ekuthuthukisweni kwezolimo lapho bengamaphesenti angama-75 abazibambela mathupha umsebenzi.
Nakuba kunendima abayiklamayo ekukhiqizweni kokudla nokuvikelwa kwakho, imithetho elawula ubunikazi nokudluliswa kwamalungelo omhlaba, ukukwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanjemanje, uxhaso lwemali, ulwazi namakhono akuzwelani nabo ngokwanele.
Igebe lobulili kwezolimo lichaza ukulahleka kwamathuba okuthuthukisa izinga nesibalo sokudla okukhiqizwa e-Afrika, okukhishwayo nokugcinwa kwakho.Ucwaningo luveza ukuthi okwenza abesifazane bashayeke kakhulu ngenxa yokuguquguquka kwesimo sezulu ukuthi umnotho wamazwe asathuthuka uncike kakhulu ezindaweni zasemakhaya futhi imikhiqizo eminingi yezolimo yethembele emvuleni kanti abantu abaningi abakulo mkhakha ngabesifazane.
Isizathu esenza ukuthi kwezolimo kwande abesifazane wukufuduka kwabesilisa beya emadolobheni beshiya ukuphathwa komnotho wasemaphandleni kubantu besifazane.Iningi lezikimu zezolimo emazweni ase-Afrika zingaphansi kwezinhlangano zabesifazane namaqembu azisizayo ngabantu besifazane.
Ngakho-ke kubalulekile ukugxila kubantu besifazane nezingane uma kuhlaziywa imithelela yokuguquguquka kwesimo sezulu ezweni ngezwe lase- Afrika.Lokhu kubaluleke kakhulu uma sifuna ukungenelela ngendlela efanele kulabo abathintekayo.
Njengoba sekwaziwa manje ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu nokungami ndawonye kwaso kuzwela kakhulu kwabesifazane nezingane, uma sibheka esifundazweni iKwaZulu-Natal, kungakanani esikwaziyo ngobubanzi bokuhlukumezeka kwabesifazane nezingane?
Okungenani siyazi ukuthi esishingishaneni sakamuva u-Idai eMozambique iningi lezisulu kube yizingane. Kubukeka sengathi KwaZulu- Natal luncane ucwaningo oselwenziwe ukuthola ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kuyehlise kanjani impilo yabesifazane nezingane basemakhaya.
Lokhu kunganaki akukho kuphela KwaZulu-Natal kodwa kuyenzeka nasezwenikazi i-Afrika. Ngeminyaka yezi-2015 ubufakazi bakhombisa ukuthi akuzange kubekhona ukucutshungulwa kwesimo ngomthelela wokuguquguquka kwesimo sezulu kubantu besifazane nezingane. Kungalokhu-ke i-African Working Group on Gender and Climate Change (AWGGCC) yaqhamuka nocwaningo ngeshwa umbiko walo awushongo lutho ngamazwe asemazansi e-Afrika.
Lobu budedengu budala inselelo enkulu kwezentuthuko lapho kukuncane ukungenelela okubhekiswe ekutheni kusizwe abesifazane ukuvikela nokwenza ngcono impilo. Kunesidingo esiphuthumayo sokuba kuthuthukiswe isizinda sethu solwazi.
Umvundla ozikhundlakhundla: UNkk uMakhosi Khoza kwelinye iqembu
Isicelo sami manje wukuthi sikwamukele ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kunemithelela eyehlukene kanti abesifazane nezingane yibo abathinteka kakhulu. Kubalulekile futhi ukuthi singenqeni ukuba sicwaninge kabanzi sithole ubukhulu benkinga ukuze sizihlomise ngolwazi.Kuyinkolelo yami ukuthi uHulumeni wesifundazwe kumele afake isandla ocwaningweni ngabesifazane, izingane nokuguquguquka kwesimo sezulu.
Kulolo lwazi angatholakala amaqhinga angcono okuqeda inkinga. Okunika ithemba wukuthi lokhu ngeke sikwenze sodwa ngoba emhlabeni sekukhona asebeqalile ukukwenza ngezindlela ezahlukene.
Izwekazi i-Afrika lizibophezele emgomweni wokulingana ngokobulili njengoba kusho i-Article 4 (I) ye- Constitutive Act ye-African Union (AU).Lokhu kuzibophezela kuqiniswe iProtocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa and the Solemn Declaration on Gender Equality in Africa (SDGEA).
Ziqinisekisa lokhu, izinhloko zemibuso nohulumeni emhlanganweni we-AU iTwenty-third Ordinary Session eyayiseMalabo ngaphansi kweCommittee of African Heads of State and Governments on Climate Change (CAHOSCC), bavuma ukuthuthukisa uhlelo iCAHOSCC Women and Gender Programme on Climate Change (CWGPCC) ngokubandakanya abesifazane kwezithinta ukuguquguquka kwesimo sezulu.
Sinethuba-ke lokusebenzisana nezinhlangano zamazwe onhlaba ikakhulukazi iNew Partnership for Africa’s Development (NEPAD) nezigcawu ze-United Nations (UN).
nguSolwazi uHamilton Simelane Nov 1, 2019